Imidiya yokuncokola kunye neMpumelelo: Ukusika kunye nokwandisa | Martech Zone
Ininzi yempumelelo yentengiso yehla ize iye kwizenzo ezibini, ukusika nokwandisa. Njengoko sibona isicwangciso sentengiso sisoma kwaye sivelise iziphumo ezimbalwa, sikhawulezisa ukusika… ngcono isicwangciso sethu sonke senza. Ngokunjalo, njengoko sibona isicwangciso sivelisa iziphumo ezintle… sisebenza nzima ukwandisa iziphumo.
Njengomzekelo, ndizama ukwenza oku yonke imihla ngebhlog. Xa ndibona ukuba zininzi izinto ezithandwa nguFacebook kodwa hayi ii-Twitter ezininzi, ndiza kuyityhalela phaya kwakhona. Ukuba ndibona itoni yokuphendula ngeTwitter nakuFacebook, ndiza kuyityhalela eStumbleUpon. Xa ndibona isihloko sikhula kakhulu, ndiza kubhala ngakumbi malunga nesi sihloko, mhlawumbi ndicwangcise Itekhnoloji yoRhwebo bonisa ngayo, okanye ucwangcise ividiyo.
Elinye iqhinga endikhe ndabona ukuba liyasebenza ngokwenene kwibhlog kukudibanisa izinto ezahlukeneyo intengiso yolwazi. Indawo ikhule phakathi kwe-10% kunye ne-15% kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kunye nenqaku elongezelelweyo. Ngenxa yoko, sinezilumkiso ezibekelwe bona kwaye ngoku sibandakanya abayili begraphic ukuphuhlisa ezethu. Eyona yamva nje indlela iselfowuni echaphazela ngayo i-ecommerce ibingumbono endibe nawo emva kokufunda iphepha elimhlophe… ke bekungafuneki nokuba senze uphando!
I-Momentum ngumba ophambili kwintengiso enqamlezileyo, ke okukhona ixesha elide ungasandisa isicwangciso esithandwayo, ngcono iziphumo zizonke zemikhankaso yakho. Asikuboni nje oku kwi-intanethi, siyayibona ikwangaphandle komgca ngokunjalo. Ukuba urhwebo luyangqubana nabaphulaphuli… njenge UFlo, iNenekazi eliQhubekayo, Sibona uthotho lweentengiso kunye neNkqubela yeNkosikazi.
Ayisiyontengiso kuphela, nokuba yeyiphi. Kuyinyani yobomi ukuba kufuneka sinciphise okubi kwaye sandise okuhle. Ndidinga ukunciphisa indlela enditya ngayo ndifunde nendlela yokwenza umthambo ixesha elide. Emsebenzini, kufuneka ndinqumle abathengi abangasimameliyo okanye abafumane iziphumo, kwaye ndisebenze nzima ukwandisa ubudlelwane kunye neenkampani ezimameleyo kwaye ziphumelele.
Iinkampani ezininzi ziqhelekile kwaye zikhululekile kwiinzame ezithile zentengiso kangangokuba azizinqumli… naxa zisilela. Ndicinga ukuba yindlela yendalo eyenziwa ngabathengisi abaye bakhululeke kakhulu phakathi. Iingqondo zabo zivaliwe ngokungenye indlela. Abathengisi be-imeyile bathembele kwi-imeyile, abathengisi bokukhangela bathembele kukhangelo, abathengisi abahlawulwayo abathembekileyo bathembele kwiintengiso… sisangqa esikhohlakeleyo esiphelela kwimikhankaso engaphumelelanga kunye neengeniso ezininzi ezilahlekileyo.
Ngokuchasene noko, abathengisi abaninzi abazihoyi kubahlalutyi kwaye ungazi nokuba yintoni esebenzayo okanye engasebenziyo. Aboluli nayiphi na imizamo yabo kumajelo. Iphulo ngalinye liqala ekuqaleni ngaphandle kononophelo kwihlabathi. Oku kubenza ukuba bangabinakho ukwenza amandla kumandla ababesele bewabekile.
Imidiya yokuncokola isinika indlela yokwandisa zonke iphulo. As David Murdico Ndathetha malunga neendlela zokuthengisa ividiyo kumdlalo werediyo wokugqibela, sathetha ngendlela ekumangalisa ngayo ukuba sele sele uneseti yabalandeli kunye nabalandeli endaweni. Njengoko ukhula kwinethiwekhi yakho yabalandeli kunye nabalandeli, utyala imali kwimpumelelo yephulo lakho elilandelayo kunye nesicwangciso sakho sokuthengisa ngokubanzi.
Eyona nto ibalulekileyo, ukuba utyalo-mali kuluntu lulandelayo lulolonga iphulo lakho elilandelayo… phambi kokuba ucwangcise ukwenziwa kwalo! Ukuba unabalandeli abayi-100,000 kwindawo abaphulaphuleyo kwaye bakunika imvume yokuqhagamshelana nabo, ingayitshintsha njani iphulo lakho elilandelayo lokuthengisa? Ndiyathemba ukuba yinto ocinga ngayo.
tags: Iincwadi zentengisoUphando lwezoPhandoWordPress
Zingaphi iinkangeleko ezikwi-imeyile yakho yamva nje?